Nguva yekuverenga: 7 maminitsi(Last Updated On: 13/11/2020)
Kana iwe uri kuronga yako yekutanga rwendo kuenda kuEurope, pane zvinhu zvishoma zvaunoda kuziva nezve zvakanyanya maguta dzakanaka munyika. isu takagadzira yakakwana gwara re 10 zvikanganiso zvekufamba iwe zvaunofanirwa kudzivirira muEurope. Rwendo rwenyika yenyika yema castles, zvinonaka chikafu, mapaki emunyika, uye nzvimbo dzinoyevedza, inogona kuva imwe yezororo risingakanganwiki iwe unenge uine. Kwete, inogona zvakare kuita ngano yakaipa uye kuva nemhedzisiro yakaipa, kana usati wanyatsogadzirira.
Chimwe chezvinhu zvekutanga zvinouya mupfungwa paunonzwa zvifambiso, kwakazara uye kunopisa mabhazi, mitsetse, uye traffic. zvisinei, kutakura veruzhinji muEurope hakusi mabhazi chete asi matramu nezvitima. Vamwe vashanyi vanosarudza kuroja mota, wobva waenda, asi zvifambiso zveruzhinji muEurope zvakasununguka kwazvo, kubata nguva, chipa, uye yakakurudzirwa.
Iyo fizi yauchadaro kubhadhara uye kuchinjana mari zvichakubhadhara iwe, saka zvakanak kuita tsvagiridzo yako online pa ekuchinjanisa mapoinzi. wo, unogona kugara uchibvunza muhotera yako yekugamuchira, ivo vanofara kukurudzira anovimbika emari mapoinzi munharaunda. Zvinokurudzirwa kuchinjanisa zvakakwana zverwendo kubva kunhandare, uye huwandu huchafukidza wekutanga 1-2 mazuva parwendo rwako.
Kana iwe uchingopa imwe nguva yekutsvaga pamberi perwendo rwako, iwe uchazvibata iwe kune chisingakanganwike chiitiko chekugadzirira. kunze, kuti kuyedza chikafu chinonaka, unogona kuchengetedza mashoma madhimoni, pachinzvimbo chekutsvaira muresitorendi yekutanga kutenderera. Kofi huru, pastry, chikafu cheko, uye zvinonakidza ndiro pamitero inonakidza, inogona kunge ichitenderedza kona.
Unoda here kupinza yedu blog positi "10 Kufamba Zvikanganiso Iwe Zvaunofanira Kudzivisa MuEurope" kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/travel-mistakes-avoid-europe/ ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)